Lafta-gareen ayaa bilaabay inuu Sheekh Aweys Cabdullahi u raadiyo cadaaladda uu maamulkiisa… – Hagaag.com
Lafta-gareen ayaa bilaabay inuu Sheekh Aweys Cabdullahi u raadiyo cadaaladda uu maamulkiisa…
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa bilaabay inuu Sheekh Aweys Cabdullahi u raadiyo cadaaladda uu maamulkiisa uga baahan yahay.
Sheekh Aweys Cabdullahi oo ah aabaha dhalay wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa ee bishii hore ee April lagu dilay Magaalada Baydhabo ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabka loo wajahay baaritaanka dilka loo gaystay carruurtiisa.
Sheekh Aweys Cabdullahi oo sidoo kale ka mid ah Culima’udiinka Magaalada Baydhabo ayaa tilmaamay in baaritaanka la sameeyay uu muujinayo inay jiraan waxyaabo badan oo aan lagu qanci karin iyo in la iska indho-tiraayo xaqiiqada dadka la tuhmayo in kiiskaasi ay ku lugta leeyihiin.
Waxa kaloo uu yiri “Nin kasta oo raba in waxaasi uu shacabka ku qanciyo waa marin habaabin uu shacabka kaga marin habaabiyay jidka saxda ah iyo mid lagu fakinayo dembiileyaal ama eedeysaneyaal, oo haddii si sax ah loo baari lahaa, lagu heli lahaa inay dembiileyaal yihiin.”
Sheekh Aweys Cabdullaahi oo la kulmay Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xusay in uu Madaxweynaha la wadaagay khaladaadka ku jira natiijada baaritaanka.
“Warbixinta ay laamaha ammaanka soo saareen waxay u gudbiyeen Madaxweynaha Koonfur Galbeed, aniga oo ah dhibanaha waxaan u sheegayaa inaanan warbixintaasi ku qanacsanayn.” Ayuu yiri Sheekha.
Sheekha ayaa yiri “Madaxweynaha markii aan warbixintaasi aan isla fallanqeynay wuxuu garwaaqsaday in warbixinta ay dulduleelo leedahay. Anagoo isla fadhino ayaa laamaha baaritaanka oo Taliska Booliska ugu horeeyo loo yeeray, wuxuuna Madaxweynaha ku dhahay ku noqda baaritaankaasi.”
Sheekh Aweys Cabdullaahi ayaa ku waramaya in uu jiro kufsi loo gaystay carruurta, isla-markaana aan kufsigaasi lagu xusin natiijada baaritaanka.
“Caqli gal miyaa in kiis kufsi la qariyo, laamaha dembi baarista kuligood way qariyeen, wayna ka wada siman yihiin, cid gooni loogu eedeynayo malahan. Kufsigaasi waxaa caddeeyay oo kashifay, bannaankana soo dhigay Isbitaal Goboleedka Magalaada Baydhabo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed-na anigaa gacanta ka saaray, weliba markii aan gacanta ka saarayay waxaan ku dhahay laamaha dembi baarista makuu sheegeen in kufsi jiro? Maya ayuu igu dhahay.” Ayuu yiri Sheekh Aweys.
Aweys ayaa intaasi raaciyay “Qoladii dembi baarista kufsiba kuma darin warbixinta, kufsi inuu jiraba warbixinta kumaba darin, marka yaa kufsaday carruurta, haddii gabar keligeed ay waxaan oo dhan sameysay?”
Taliska Booliska ee Gobolka Bay ayaa Sabtidii sheegay in haweeneyda loo hayo kiiskaasi, ay iyadu kaxeysay carruurta, ka hor intii aan la waayin carruurtaasi. Haweeneydani ayaa ah afada Sheekh Aweys Cabdullaahi.
Si kastaba ha-ahaatee Madaxweyne Lafta-gareen ayaa CID-da iyo hay’adaha kale ee ammaanka ku cadaadinaya in uu ka doonayo in cadaalad uu helo Sheekha.